editor — Mon, 05/14/2018 - 02:05
editor — Mon, 04/23/2018 - 00:44
"यो संसारकी एक मात्र" उसले इमेल पठाएको छ । जब तिमी मित्रताको पराकाष्ठामा उन्मुक्त भएको वातावरणमा आफूलाई पाउनेछौ तब तिम्रो मन दुख्ने कुराहरू पराजीत हुनेछन् र त्यतिखेर तिमीले बिस्तारै बिहानीको जस्तै शीतलता महसूस गर्नेछौं ।
editor — Fri, 03/30/2018 - 22:29
म पत्रकार, रुढीवादी परम्परा पटक्कै मन पराउँदिन । मेरो आदर्शले सामाजिक व्यवहारमा बाँधिन समय लाग्यो । बिहे पनि उमेर ढल्केपछि भयो । बिहे गरेको वर्ष दिन नपुग्दै श्रीमती कहिले टाउको दुख्यो त कहिले कम्मर दुख्यो भन्न थालिन् । कहिलेकाहीँ पिठिउँको र पेटको पनि चुक्ली लगाउँथिन् । सिकिस्तै नभए पनि स्वस्थ भने कहिल्यै नहुने ! नाम चाहिँ गोरी, छालाको रङले जुराएको । अनुहार भने जहिल्यै अँधेरो बनाइराख्ने । अस्पताल लिएर गएँ । डाक्टरहरूले सोध्दा कहिलेकाहीँ घुँडा पनि दुख्छन् भन्न पछि परिनन् ।
vishnu.bhurtel — Sun, 03/25/2018 - 23:29
हेर बुढ़ी एउटा छोरा त चाहिन्छ होला!
बुढाले आफ्नी अर्धांगिनी सँग गुनासो पोख्दै थियो।
ह्या म त अब सक्दिन बुढा एउटी छोरी एघार वर्ष पुगी सकि यस बीचमा हामीले
तीन ओटा गर्भपात गरायौं।
म पनि त मान्छे हो मैले कति सहन सक्नु? आफ्नै कोख मा भैरहेको भ्रूणहत्याले
मलाई पोलिरहेको छ। बरु हजुर अर्को विवाह गरिस्यो।
श्रीमती को क़ुरा सुनेर आत्मग्लानि का साथ पुर्लुक्क बुढ़ी लाई हेर्दै थियो।
दुबैजना का आँखा चिसीएका थिए। एक्छिन वातावरण मा सन्नाटा छायो।
तट पश्चात निन्याउँरो पारामा बुढा ले पुनः जिज्ञासा राख्यो।
"शान्ति" म तिमीलाई छोडेर अरु सँग विहे गरुँ यो त हुनै सक्दैन तर एउटा अर्को विकल्प छ।
HomSuvedi — Fri, 03/09/2018 - 15:18
फोन आउने बित्तिकै शम्भुजीले बडो हडबडाएर भान्सातिर पस्न लागेकी पत्नीलाई कराए "ए सर्मु, लौ है नभेटिने पो हो कि जस्तो लाग्यो । लु छिटो जाऊँ हिँड चाँडो । घाट लाने कुरा पो आइसक्यो । लौ चाँडै गर ।"
यसरी ससुरालीबाट फोन आएर सर्मिलाका आफन्त बितेको कुरा सुनाए । सर्मिलाले आफ्नी काकी राती नै बितिछिन् भन्ने कुरा बुझिहालिन् । अलिकति सुँक्सुँकाइन् र हस्याङ्फस्याङ् गर्दै एेनाका अघि बसिन् ।
"लु हेर कस्तो होला । त्यो लक्मे पाउडर ल्याइदिनु भनेको कति भो कुनै वास्ता नै छैन । उनीहरुलाई जसरी हिने पनि भैहाल्छ के छ र !" गुनासो गरिन् ।
"नकराऊ, अहिले चाँडो गर" शम्भुजी मोटरसाइकल निकाल्दै कराए ।